जब सुन्तलीले धुर्मुसलाई सोधिन् – मलाई तपाईंको साथ कहिलेसम्म रहन्छ ? (भिडियाे सहित) - Naya Patrika
कला क्षेत्रपछि समाजसेवाबाट आफ्नो परिचय फराकिलो बनाएको नाम हो, सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ र कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’ । ‘धुर्मुस सुन्तली’ फाउन्डेसनको नाममा एकीकृत वस्ती निर्माणमा जुटेको यो जोडीलाई सञ्चारमाध्यमले अनेकौँ पटक प्रश्नको कठघरामा उभ्याउने गरेको छ । जुन आम दर्शकले देखेका छन्, पाठकले पढेका छन् । र, दुवैले सकेसम्म त्यस्ता प्रश्नको सहज उत्तर दिने गरेका छन् । तर, एक अर्काले एकअर्कामाथि नै प्रश्न गरेका दृष्य भने आइतबार पहिलोपटक देखिएको छ ।
नयाँ पत्रिकाको न्युजरूममा आइतबारको ‘फेसबुक लाइभ’मा सहभागी भएका धुर्मुस र सुन्तलीले एकअर्कालाई निकै रोचक प्रश्न सोधेका छन् । ती प्रश्न र तिनका जवाफ कस्ता थिए ? हेर्नोस् यो भिडियो………